🥇 ▷ MásMóvil waxay hoos u dhigeysaa qaar ka mid ah isku dhacyadeeda waxayna cusboonaysiisaa kaydka taleefanka gacmeedka ee eber ah ✅
MásMóvil waxay hoos u dhigeysaa qaar ka mid ah isku dhacyadeeda waxayna cusboonaysiisaa kaydka taleefanka gacmeedka ee eber ah
Grupo MásMóvil waxay isu diyaarineysaa ku soo laabashada dugsiga. Haddii daqiiqado yar ka hor Yoigo uu sheegay inuu siinayo saddex bilood Netflix iyo hal sano oo ah Agile TV, Hadda waa MásMóvil oo ku dhawaaqa wararka: dhimis qaar ka mid ah qiimaheeda muddo saddex bilood ah iyo taleefanno gacmeed cusub oo ah eber euro ama Google Home Mini.
Soo bandhigga, kaas oo aan si faahfaahsan hoos ugu faahfaahin doono, ayaa durbadiiba laga shaqeysiiyay websaydhka shirkadda. Isku soo wada duuboo, adeegsadayaashu waxay awoodi doonaan inay galaan 600MB fiber qiimaha 100MB saddex bilood iyo ka dhimo qiimayaasha 10 10 Plus iyo 20 GB oo ka badan, sidoo kale muddo saddex bilood ah.
Kani waa buugga-hayaha ‘MoreMóvil’
100 MB AM ADSL SYMBOL FIBER
RIIQAD KA BADAN 3 GB
39.89 euro bishii (isma beddeleyso)
SII BADBA 10 GB
43.89 yuuro 39.89 euro bishii bishii saddexda bilood ee ugu horreysa
RIIQAD KA BADAN 20 GB
49.89 euro 43.89 euro bishii bishii saddexda bilood ee ugu horreysa
SYMBOL FIBER 600 MB
53.89 euro 39.89 euro bishiiba inta lagu jiro saddexda bilood ee ugu horreeya
58.89 euro 43.89 euro bishii saddexda bilood ee ugu horreysa
FIBER 100 MB AMA ADSL + XARUN
10 euro bishii (isma beddeleyso)
FIBER 600 MB AM ADSL + FIXED
25 yuuro 10 euro bishiiba inta lagu jiro saddexda bilood ee ugu horreeya
Waxaan ku bilaabeynaa dib-u-eegis ku sameynta soo-jeedinta ku-meel-gaarka ah, fiber iyo mobiilka. Badbaadinta qorshaha aasaasiga ah (Rate Plus 3 GB), inta hartay ayaa ahaa Waxaa hoos u dhacay qiimaha qiimahaaga isla markiiba. Tusaale ahaan, 600 MB qorshaha xarkaha fiimikada leh oo lagu daro ah $ 20 GB qiimaha wuxuu la mid yahay kan kale ee ah 600 MB fiber summeteri oo leh 10 10 GB oo sicir-dhimis ah.
Sare u qaadidaas waxaa lagu darayaa 600 MB fiber oo ah qiimaha 100 MB muddo seddex bilood ah iyo dhimista 50% ee khadadka mobilada dheeriga ah weligood. Dhanka kale, kuwa doorbida shirkad iskuxiran oo leh qiime ka badan 10 GB ama kabadan 20 GB ayaa laga yaabaa dooro mobiilka eber e euro (ZTE Blade A3 2019, Nokia 2.2, Alcatel 1S), Google Home Mini ama Kids Smartwatch, sidoo kale waa eber euro.
23.90 yuuro 19.90 euro bishiiba inta lagu jiro saddexda bilood ee ugu horreeya
29,90 euro 23.90 yuuro bishiiba inta lagu jiro saddexda bilood ee ugu horreeya
The Qiimaha mobilada kaliya Waxaa sidoo kale si ku-meel-gaar ah hoos loogu dhigay iyagoo raacaya isla qaabkii la mid ahaa kuwii loo adeegsaday. Xaddiga daqiiqadaha aan xadidnayn iyo 20 GB ee xogta ah ayaa u baahan wixii 10 GB ah oo aan qiimo dhimis ah lahayn, tanna, haddana, waxay taasi u dhigantaa 3 GB.
Macluumaad dheeri ah | Mobilo badan
Compartir MásMóvil waxay hoos u dhigeysaa qaar ka mid ah iskumiddeeda waxayna cusboonaysiisaa kategiiska mobiilka ee eber